Unesco World Heritage Luang Prabang ọnọdụ nke ajọ ihe ọghọm
Home » Na-agbasa News Travel » Unesco World Heritage Luang Prabang ọnọdụ nke ajọ ihe ọghọm
Ndị njem nlegharị anya nke China 13 anwụọla mgbe ụgbọ ala bọs kpọgara ha na obodo ezumike Luang Prabang na Laos nwere nsogbu breeki. Na mgbakwunye, ndị ọbịa 31 na-anata ọgwụgwọ. Statelọ ọrụ mgbasa ozi nke mba China gosiri foto nke ndị nnapụta na-agagharị na mmiri idei mmiri.
Ihe ọghọm okporo ụzọ na Laos, Thailand, Cambodia, na Myanmar bụ ihe zuru ebe niile, yana mgbe mgbe, iwu nchekwa na-ada iwu na ndị mmanye iwu
Oge udu mmiri site na June ruo Ọktọba na-edekwa okporo ụzọ ime obodo na oke mmiri ozuzo na-eme ọnọdụ na-amị amị.
Ndị njem nleta China dị mkpa na Laos na ndị mbata mụbara 13 pasent na ọkara ọkara nke afọ a.
Luang Prabang bụ obodo ihe nketa ụwa. Obodo a di na mgbago ugwu Laos n’etiti ala ugwu. Obodo a ka ewuru na peninsula nke Mekong na Nam Khan guzobere. Ugwu ugwu (ọkachasị ugwu PhouThao na PhouNang) gbara obodo ahụ gburugburu na ahịhịa juru.
Ndi njem nlegharị anya nke Hawaii na-eru nso oge ntanye? Paradaịs n'ime nnukwu nsogbu?
PM Britain: Brexit agaghị emetụta njem n'efu n'etiti UK na Ireland